रुखमा रेष्टुरेन्ट बनाएर उदाहरणीय बनेका लिम्बू दाजुभाइ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रुखमा रेष्टुरेन्ट बनाएर उदाहरणीय बनेका लिम्बू दाजुभाइ
काठमाडौं–चारैतिर हरियाली जंगल । चिरबिर-चिरबिर चराको आवाज । सुनसान वातावरण । जंगलको बीचमा ठूलो बरको रुख । बरको रुखमाथि निलो र रातो रङले सजाइएको रेष्टुरेन्ट
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ रुखमा पनि घर बन्छ र ? किनकि हामीले काठबाट बनाएको घर मात्र देखेका छौ । तर सीप, विचार र क्षमता हुनेहरुले रुखमै पनि घर बनाएका छन् । व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
व्यवसाय गर्नका लागि शहरी क्षेत्र नै चाहिन्छ भन्ने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमै होस् तर नयाँ व्यवसाय होस जुन युवावर्गको रोजाईमा परोस् । यस्तै सोच राखेर धनकुटाका एक दौतरीले बरको रुखमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् ।
रोजगारीको खोजीमा परदेशका मरुभूमिमा दिनरात पसिना बगाइरहेका नेपालीहरुका लागि यी दौतारी एक उदाहरणीय पात्र बन्न सक्छन् ।
परदेशमा मात्र होइन । पछिल्लो समय जन्मथलो छोडेर कामका शिलशिलामा विभिन्न शहरतिर पस्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । शहरमा मात्र होइन नयाँ ढंगले व्यापार शुरु गर्न सकेमा गाउँघरमै पनि राम्रो हुने रेष्टुरेन्ट सञ्चालक हेम लिम्बू बताउँछन् ।
खेर गइरहेको स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकेमा गाउँ मै काम गर्न सकिने र आम्दानी पनि हुने हेमको भनाइ छ ।
वि.स. २०४५ सालमा धनकुटा जिल्लामा हेमको जन्म भयो । उनी परिवारका एक्लो छोरा हुन् । भनाइ नै छ ‘एक्लो सन्तान सबैको प्यारो हुन्छ’ । तर हेमको जीवनमा त्यो कहिल्यै लागू भएन ।
धनकुटाकै एक सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरे उनले । घरबाट १ घण्टा हिड्नुपथ्र्यो विद्यालय पुग्न । परिवारको आर्थिक अवस्था पनि न्यून थियो । सानै उमेरदेखि बिहान बेलुका खेतवारीको काम गर्ने र दिउँसो विद्यालय जाने गर्थे उनी ।
विगतका दिनहरु सम्झना गर्ने क्रममा उनी भन्छन, ‘सानो छँदा बिहान र बेलुका खाना समेत आफैं पकाएर खाएर स्कुल पढ्न जान्थे ।’ पढाइ निरन्तर चलिरहेकै थियो ।
सानै उमेरमा आमाबुबा गुमाउँदाको पीडा
घरमा आमा सामान्य बिरामी हुनुहुन्थ्यो । हेम १२ वर्षको हुँदा उनको परिवारमा दुखद घटना घट्यो । ती दिनहरु सम्झिँदा अझै पनि उनको आँखा रसाउँछन् । ‘म १२ वर्षको थिएँ आमाले मलाई सधैका लागि छोडेर जानुभयो’ हेमले निराश हुँदै भने ‘आमा बिनाको सन्तान भए घरमा बुबा र म मात्र भयौं ।’
सानै उमेरमा आमाको मृत्यु भएपनि बुबाले उनलाई आमाको समेत माया दिएर हुर्काएका थिए । गाउँमा खेतीपातीको काम प्रशस्त हुन्थ्यो । हेम बुबालाई सघाउनका लागि स्कुल समेत बिदा लिन्थे । यसकारण पनि उनी सानै उमेरबाट व्यवहारिक बने ।
बालकपनदेखि नै जागरिलो चलाख स्वभावका हेम अध्ययनमा पनि निकै रुचि राख्थे । पढाइको क्रम चलिरहेकै थियो । तर उनले ०६६ सालमा बुबालाई पनि गुमाए ।
‘आमा पछिको एउटै सहारा बुबा थिए’ ती दिनहरु सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘बुबा पनि २१ वर्षको उमेरमै बित्नुभयो ।’
बुबाआमाको मृत्युपश्चात उनले अध्ययनलाई त्यही बिट मारे । सानै उमेरदेखि संघर्षमय जीवन बिताएका हेमलाई भविष्यको निकै चिन्ता लाग्थ्यो । त्यसमाथि बुबाआमा नहुँदाको पीडा त छदै छ ।
यसैक्रममा ०६८ सालमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए उनी । नयाँ व्यवसाय गर्ने सोच पहिल्यै देखि थियो उनको । तर लगानी गर्न उनीसँग पर्याप्त रकम थिएन । यसैबीच उनले पैसा कमाउनका लागि विदेश जाने सोच बनाए ।
‘गाउँघरमा बसेर जसोतसो चलेकै थियो’ हेमले खबरहबसँग भने ‘तर जीवन उकास्नका लागि चलेर मात्रै नपुग्ने रहेछ ।’
पैसा कमाउन कतार पुगे
परदेश गएर पैसा कमाउने र स्वदेश फर्किएर केही व्यवसाय थाल्ने सोच आयो उनको । तर परदेश जानका लागि पनि उनीसँग पैसा थिएन । त्यससँगै परदेश जाने सोचले धनकुटाबाट राजधानी आइपुगे उनी ।
परदेश जानुभन्दा अघि केही सीप सिकेर गए आफैलाई त्यहाँ आफैंलाई राम्रो हुने थियो भन्ने सोचे ललितपुरको सातदोबाटोमा इलेक्ट्रिोनिक तालिम सिके ।
९० दिन तालिम लिए उनले । डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कतार पुगे ०६९ सालमा । राम्रो जागिर पाइएला र पैसा कमाइएला भन्ने सोच बोकेर कतार पुगेका उनी सुरुवाती दिनहरुको याद स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘भाषामा निकै समस्या भयो हिन्दी नि नआउने अंग्रेजी पनि २ महिनासम्म त धेरै गाह्रो भयो ।’
विस्तारै बानी बन्दै गए उनी । ‘सप्लाई कम्पनीमा कामको ८ सय र खानाका लागि थप २ सय दिन्थ्यो १ हजार हुन्थ्यो’ उनले थपे ‘त्यो भनेको नेपाली २८ हजारसम्म हो ।’
कामको खोजीमा परदेशसम्म पुगेका हेमलाई डेढ लाख ऋण तिर्नका लागि करिब साढे दुई वर्ष लाग्यो । जसोतसो ऋण तिरेर केही रकम जम्मा गरेका हेम साढे ३ वर्षपछि अर्थात् ४२ महिनामा स्वदेश फर्किए ।
पुष ०७३ सालतिर स्वदेश फर्किएका हेमले नयाँ व्यवसाय खोल्ने सोच बनाए ।
जन्मभूमिमा व्यवसाय गर्ने सोच
धेरै युवाहरुको सोच हुन्छ । परदेश जाने पैसा कमाउने र स्वदेशमा केही व्यवसाय गर्ने । धेरैले यो सोच पुरा गरेका पनि छन् । प्रायजसो युवाहरुको रोजाइमा होटल, रेष्टुरेन्ट नै पर्ने गर्छन् । तर अधिंकाशले शहरी क्षेत्रमा विशिष्टका तरिकाले खोल्ने गर्छन् ।
तर हेमले आफ्नै जन्मभूमिमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने सोच बनाए । अहिलेसम्म देखिएका रेष्टुरेन्टभन्दा भिन्न रेष्टुरेन्ट खोल्न सोचेका थिए उनले । तर कसरी गर्ने भन्ने बारे केही सोचेका थिएनन् ।
बरको रुखमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने सोच
गाउँघरमै छिमेकी प्रेम लिम्बूसँग भेट भयो हेमको । नयाँ साथीभाइ मिलेर केही व्यवसाय गरौं भन्ने कुराकानी चल्यो उनीहरुबीच । नाताले प्रेम हेमको भाइ पर्छन् ।
‘भ्यू टावर बनाउने सोच थियो भाइको’ हेमले भने ‘भ्यू टावर बनाउनुभन्दा रेष्टुरेन्ट खोलौं न मैले भने ।’
हेमको घर छेउमै ठूला दुइवटा बरका रुख थिए । रुखमा रेष्टुरेन्ट बनाउन सके कस्तो होला ? उनले मनमनै सोचे । भाइसँग सल्लाह गरे ।
५ लाखमा ट्रि हाउस
रुखमै होटल खोल्ने सोचेका उनीहरुले अहिलेसम्म काहीकतै यसरी होटल सञ्चालन गरेको देखेका भने थिएनन् । ‘अरुले नगरेको काम पो गर्नपर्छ सबैले गरिरहेको काम त के गर्नु’ कुराकानीका क्रममा उनले भने ‘त्यसकारण रुखमै होटल बनाउन शुरु गर्‍यौं ।’
काठ र जस्ताले चिटिक्क पारेर रेष्टुरेन्ट बनाउन ५ लाख लगानी लागेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘काठहरु आफ्नै बारीको प्रयोग भएको छ ।’
यसरी गाउँमा उदाहरणीय पात्र बनेका यी दौतरीलाई स्थानीयले केही समयसम्म त हासोको पात्र नै बनाएका थिए । तर जब रुखमा चिटिक्क साना घरहरु देखिन थाले सबै अचम्मित बनेका छन् ।
अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको केन्द्रविन्दू बनेको छ ‘छुमलुङ ट्रि हाउस’ । ट्रि हाउसमा धनकुटा स्थानीय परिकारहरु पाइन्छन् भने रुखमा बनेको घरमा आन्नदले बस्ने सुविधासमेत छ ।
छुमलिङ ट्रि हाउसकै छेउमा अर्को ठूलो बरको रुख रहेकाले अबको केही समयपछि अर्को रुखमा पनि ट्रि हाउस सञ्चालन गर्ने उनीहरुको सोच छ ।
२०२० लाई सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । त्यसकालागि सबै निकायले आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै हेम र प्रेमको लक्ष्य पनि धनकुटालाई ट्रि हाउसले चिनाउने र बढि भन्दा बढि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘स्वदेशमै काम गर्नका लागि आह्वन समेत गर्छौं’अन्तमा उनले भने, ‘सिर्जनात्मक काम गरेर गाउँलाई विकास गर्ने नै हामी युवाहरुको काम हो ।’
अब २५ वर्ष उमेर नपुगेका युवाले मदिरा पिउन नपाउने
ट्रक ड्राइभरसँग ३ हप्ता अफ’येर, गर्भव’ती बनाएर भागे’पछि १८ वर्षकी सरिताको य’स्तो बि’चल्ली